कस्तो बन्यो सुशान्त र साराको ‘केदारनाथ’ ? « News24 : Premium News Channel
कस्तो बन्यो सुशान्त र साराको ‘केदारनाथ’ ?
प्रकाशित मिति : Dec 06, 2018
एजेन्सी । गत बुधबार फिल्म ‘केदारनाथ’को मुम्बईमा स्पेशल स्त्रिनिङ गरिएको छ । अभिषेक कपुरको निर्देशनमा बनेको यो फिल्ममा सुशान्त सिंहराजपुत र सारा अली खान मुख्य भुमिकामा छन् । साराको यो डेब्यु फिल्म हो । फिल्मको मुम्बई स्क्रिनिङमा बलिउडका युथ ब्रिगेडका साथै चर्चित कलाकारहरु उपस्थित भएका थिए ।
यसका साथै ‘केदारनाथ’ हेरिसकेपछि कलाकारहरुद्वारा रिभ्यु पनि दिइएको छ । फिल्म हेरिसकेपछि उनिहरुले साराको पहिलो यस फिल्मलाई पोजेटिभ प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्जुन रापालले निर्देशक अभिषेक कपुरको शान्दार कोशिसको तारिफ गरेका छन् । साथै क्लाइमेक्स सिक्वेन्समा अभिनेत्री साराको कामबाट प्रभावित भएको बताएका छन् ।
यता सुजैन खानले साराको कामलाई नयाँ ट्यालेन्ट भनेका छन् । यसका साथै शिल्पा शेट्टीकी श्रीमान राज कुन्द्राले पनि मेकर्स र कलाकारहरुको खुलेरै तारिफ गरेका छन् ।
अर्जुन रामपालले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘‘केदारनाथ’ हेरियो । फिल्म राम्रो बनेको छ । सबै कलाकारहरुले राम्रो भुमिका निभाएका छन् । सारा अली खान क्लाइमेक्समा आश्चर्यजनक छन् ।’
यता सुजैन खानले् पनि इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, ‘एक शान्दार कहानी । नयाँ सुपर ट्यालेन्ट सारा आइसकेकी छन् । सुशान्त शान्दार छन् । दुवैलै कुशल अभिनय गरेका छन् । ‘केदारनाथ’ले मेरो दिल छोयो ।’
यता राज कुन्द्राले लेखेका छन्, ‘वाउ (WOW) भन्न चाहन्छु । केदारनाथ फिल्म बनाउन सजिलो थिएन । अभिषेक कपुरले बनाएर देखाए । भिजुअल इफेक्ट र कहानी राम्रो छ । सुशान्त र सारा निकै रियल छन् । फिल्म हेर्न लायक छ ।’
मिडिया रिपोर्टका अनुसार ‘केदारनाथ’को फस्र्ट डे कलेक्शन लगभग ५-६ करोडको हुनसक्नेछ । यो फिल्म ३५ करोडमा बनाइएको हो ।
दुई लाखको लागतमा तयार भयो ‘हमार जोडी हिट’
दुई सय केजी तौल उठाएर सबैलाई चकित बनाउँदै टाइगर श्राफ
सर्बोच्चले भन्यो- ‘अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्नु’
यस्तो बन्यो ‘हजार जुनीसम्म’को ‘सत्य सत्य’
सर्वोच्च अदालत पुगिन् अभिनेत्री शिल्पा
नेपालकै ठूलो रियालिटी शो ‘हिरो नेपाल’ को घोषणा
मधेसको विकासमा पहाडको समृद्धि जोडिएको छः अध्यक्ष प्रचण्ड
access_time 9:57 pm
मधेसको विकासमा पहाडको समृद्धि जोडिएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
access_time 9:51 pm
इटालीको एक धारामा पानी होइन चौबिसै घण्टा रक्सी बग्छ
access_time 8:56 pm
धनुषा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसको विकास र समृद्धिलाई
धनुषा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसको विकास र समृद्धिलाई सरकारले
एजेन्सी । धारामा पानी होइन रक्सी बग्छ भन्दा अनौठो लाग्छ । तर इटालीको फाउन्टेना डेल